Maxaa la sameeyaa si aad u joojiso ka fikirka lammaanaha hore | Bezzia
Maria Jose Roldan | 21/06/2022 22:59 | Xiriirka
Ma fududa ama ma fududa in xidhiidh la joojiyo. U rogida bogga dad badan ayay ku adag tahay, gaar ahaan marka aanad joojin ka fikirka lammaanahaagi hore maalintii oo dhan. Taas awgeed, waxaa muhiim ah in la maro marxaladaha kala duwan ee murugada oo aad awood u yeelatid inaad dib u dhisto nolosha sida ugu macquulsan.
Maqaalka soo socda ayaanu ku siin doonaa Tilmaamo taxane ah oo kaa caawin kara inaad illowdo lamaanahaagi hore.
1 Xushmee hab-socodka murugada
2 Dareenku waa sax waana lagama maarmaan
3 Soo hel wax dhalanteed kaa buuxinaya
4 Waa inaad bogga rogtaa oo aad illowdaa lammaanihii hore
5 u tag xirfadle
Xushmee hab-socodka murugada
Marar badan, khaladka weyn ayaa la sameeyaa marka lagu soo rogo fikradda joojinta ka fikirka lammaanihii hore. Waa wax iska caadi ah in ay adagtahay in aad joojiso fikirka oo aad gaadho waa wax wakhti qaadan doona. Waa inaad taqaan sida loo ixtiraamo hab-socodka baroorta una samir ilaa inta laga gaadhayo wakhtiga aan laga fikirin lamaanaha hore.
Dareenku waa sax waana lagama maarmaan
Kala tagista lamaanahaaga waxay keeni doontaa dareeno isdaba joog ah oo nooc kasta leh, murugo ilaa hilowga ama eed. Waa wax iska caadi ah in dareenka noocaan ah uu dhaco waana sababta ay muhiim u tahay in la ansixiyo. Oggolaanshaha dareenka noocaas ah waa furaha marka ay timaaddo rogid bogga iyo soo afjarida kala go'a.
Soo hel wax dhalanteed kaa buuxinaya
Waa muhiim in la raadiyo wax soo celin kara dhalanteedka lumay. Wax kastaa waxay u socdaan si ay u joojiyaan ka fikirka lammaanaha hore oo ay la noolaadaan yididiilo iyo togan maalinba maalinta ka dambaysa. Naftaada oo aad ku mashquuliso hiwaayadaha ama xiisaha qaarkood waxay kuu oggolaanaysaa inaad niyadda ku sii jirto oo aad ku raaxaysato nolosha.
Waa inaad bogga rogtaa oo aad illowdaa lammaanihii hore
Waa inaad taqaanaa sida loo rogo bogga oo aad ka digtoonaato in meertadu dhammaatay. Si tan loo sameeyo, caado calaamad ah ayaa la samayn karaa oo xiriirka si cad ayaa loo gooyaa lammaanihii hore. Dhaqanku waa furaha marka ay timaado in la joojiyo ka fikirida qofka oo ay awood u leedahay in ay ku raaxaystaan ​​nolosha cusub.
u tag xirfadle
Haddii loo baahdo, waxaad caawinaad weydiisan kartaa xirfadle. Dad badan ayaan awoodin inay keligood xidhiidhka u jaraan lammaanahoodii hore waxayna u baahan doonaan caawinta xirfadle. Caawimo kasta waa yar yahay marka ay timaado aqbalaadda kala go'a iyo ka fogaanshaha nooc kasta oo fikirka ku saabsan lammaanaha hore.
Marka la soo koobo, ma fududa inaad ka fikirto lammaanihii hore. Qof kastaa wuu ka duwan yahay, markaa ogaanshaha sida loo ansixiyo dareenka kala duwan iyo u oggolaanshaha waqtiga bogsashada dhammaan boogaha waa fure. Waxaa muhiim ah in aanad naftaada ku xukumin si xun marka aad ka fikirayso lammaanahaagii hore iyo inaad samayso wax kasta oo suurtogal ah si aanu xanuunku u sii waarin muddo ka dib. Mararka qaarkood calaamadaynta naftaada ama dejinta yoolalka qaarkood waxay kaa caawin kartaa inaad ka gudubto murugada. Xusuusnow inaad u tagto xirfadle haddii aadan awoodin inaad ka takhalusto fikradaha noocaas ah madaxaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Maxaa la sameeyaa si aad u joojiso inaad ka fikirto lammaanihii hore